केबुलकार निर्माणको गृहकार्य शुरु - Internet Khabar
हेटौँडा, २२ कात्तिक । मकवानपुर जिल्लाको पर्यटकीयस्थलको विकास र प्रवद्र्धन गर्न उद्देश्यले केबुलकार निर्माण गर्न गृहकार्य शुरु भएको छ ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको सिमभञ्ज्याङ र भीमफेदी गाउँपालिकाको भैसे जोड्ने गरी केबुलकार निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गरिएको थाहा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोलीले उक्त नगरपालिकाको वडा नं ४ स्थित सिमभञ्ज्याङको स्थलगत निरीक्षण एवम् अवलोकन गरिएको थाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्ग गोपालीले आज राससलाई बताउनुभयो ।
जिल्लाको पर्यटकीयस्थलमध्ये महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल रहेको सिमभञ्ज्याङवाट ड्रोनको प्रयोग गरी दूरीको नापनक्सा र प्रारम्भिक अध्ययन भएको बताइएको छ । सिमभञ्ज्याङवाट भीमफेदी गाउँपालिकाको भैसेतर्फ ६ किलोमिटर र थाहा नगरपालिकाको दामनतर्फ करीब ७२२ मिटरको दूरी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा पाइएको उपप्रमुख गोपालीले भन्नुभयो ।
यस सन्दर्भमा भीमफेदी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा रामप्रसाद आचार्यले मकवानपुर जिल्ला पर्यटकीयस्थलका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारी र गैरसरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
हेर्नुहोस् बजारमा कति छ आज सुन चादीको मूल्य ?
अमेरिकी डलर र कुवेती दिनारको मूल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?
बुधबार अत्यधिक बढेको सुन-चाँदीको मूल्य आज कति ? हेर्नुहोस्